Mepụta ihe mmado nke gị maka WhatsApp na Sticker Studio | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | Ngwa gam akporo, Nkuzi, Whatsapp
Akwụkwọ mmado Studio bụ ngwa na-enye gị ohere ịmepụta ihe mmado gị maka WhatsApp. N'ụzọ dị otu a, ị ga-enwe ike ị mepụta ngwungwu akwụkwọ mmado gị ma chekwaa onwe gị site na ịwụnye ọtụtụ ndị ọzọ nọrịrị na Playlọ Ahịa Google kemgbe ha rutere na nkata ngwa ahụ kacha mma.
Stfọdụ akwụkwọ mmado na Anọla na Telegram n'oge ha na nke ahụ bụ ihe ejikọtara ọnụ, ya mere, ọ bara uru iwepụta oge anyị iji mepụta nke anyị wee kesaa ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ. Ngwa n'efu anyị na-akụziri gị otu esi eji.
1 Akwụkwọ mmado na WhatsApp
2 Otu esi emepụta ihe mmado WhatsApp gị na Sticker Studio
Akwụkwọ mmado na WhatsApp
Fewbọchị ole na ole gara aga anyị na-egosi gị akwụkwọ mmado kachasị mma maka WhatsApp na a ngwugwu nke kasị iche. Ha na-abịa ọzọ ka gam akporo ụlọ ahịa iji mee mkparịta ụka ndị ahụ Jiri otu akụkọ kacha ọhụrụ.
Akwụkwọ mmado WhatsApp bụ nke dị n’akụkụ bọtịnụ emoji na bọtịnụ GIF na-akpali akpali. Nwere ike iji ndị na-abịa na ndabara, ma ọ bụ site na ntinye nke nchịkọta nke ga-enyere gị aka ịgbakwunye usoro ịchọrọ. Eziokwu bụ na enwere ọtụtụ ha iji chọta usoro Rick & Morty, The Simpsons ma ọ bụ isiokwu nke egwuregwu vidio.
A ụwa dum emeghere maka ntụrụndụ na mkparịta ụka ndị ahụ nke WhatsApp nke ọtụtụ oge anyị metụtara usoro GIF, ụfọdụ emojis ma ugbu a akwụkwọ mmado ndị ahụ. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ igosipụta nkwupụta gị, ụzọ dị mma karịa ịmepụta akwụkwọ mmado WhatsApp gị na Sticker Studio.
Otu esi emepụta ihe mmado WhatsApp gị na Sticker Studio
Have nwere ngwa ahụ n'efu na Playlọ Ahịa Google. Gbalịa ịse foto ma ọ bụ họrọ eserese site na gallery ka anyi wee bipu ya. Anyị ga-egbutu ya were onyinyo nke mmadụ wee mee ka ihe ahụ bụrụ ihe ọchị.
Ahapụ iji PNG faịlụ na oyi akwa ha, Ọ bụ ezie na nke a anaghị arụ ọrụ ma anyị ga-ahụ agba dị n’azụ ma ọ bụ obere oghere ndị ahụ nke na-adịkarị ichekwa usoro faịlụ ahụ site na Adobe Photoshop. Ihe ihere, n'ihi na ngwa a ga-enye anyị ohere ịmepụta nchịkọta akwụkwọ mmado mara mma nke anyị ga-eji rụọ ọrụ ntakịrị.
Agbanyeghị, ya nwee obere ndidi ma na-ese ihe nke ọma na silhouette, anyị nwere ike were anyị foto ike a mkpọ nke na-akpa ọchị na-akpa ọchị akwụkwọ mmado. Gaa maka ya.
Anyị malitere ngwa ị nwere ike ibudata site ebe a:
Akwụkwọ mmado Studio - WhatsApp ihennyapade Onye kere
Developer: Ngwa PlayStudio
Ọzọ, na ihuenyo mbụ, pịa na bọtịnụ «+» nke di na ala aka nri.
Ihe na-esote bụ ịhọrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịse foto ma ọ bụ were onyonyo site na gallery ahụ.
Họọrọ ihe oyiyi, anyị nwere ike ise gị silhouette nke mere na ọ bụ otu ọnụ ọgụgụ nke akwụkwọ mmado ahụ. Nke ahụ bụ, gbalịa ịpị ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ ihe ịchọrọ ịgbanwe n'ime nnyapade ka mma dị ka o kwere mee maka nsonaazụ kacha mma.
Na mpio ọzọ ị ga-ahụ otu o si dị.
Ị nwere nhọrọ ịchekwaa onyonyo ma ọ bụ redraw iji nweta silhouette chọrọ.
Echekwaa, itinye aha na mkpọ ahụ.
Ga-enwerịrị opekempe 3 akwụkwọ mmado kwa mkpọ iji nwee ike ịnyefe ya na WhatsApp.
Ozugbo emere nke a, pịa na WhatsApp bọtịnụ na akwụkwọ mmado ihuenyo, ma gaa ozugbo na ngwa nkata.
Already nweela akpa mmado gị ahaziri iche na WhatsApp ịmalite ha na nkata ọ bụla. Cheta na ugbu a ị nwere ike ịnwe nchịkọta 10 kachasị nke nwere ike ịnwe ihe mmado 10.
Ihe kachasị mma bụ na a ga-emelite ya n'oge na-adịghị anya ka anyị nwee ike ịnwe karịa na ị nwere ike ịgbanwe oke onyonyo ma ọ bụ jiri mmetụta. N'agbanyeghị ihe na-adọrọ mmasị n'ezie ga-abụ nkwado maka usoro PNG weta nghọta site na ngwa ngwa ọzọ dị ka Adobe maka gam akporo.
Ya mere ị maraworị otu esi emepụta ihe mmado nke gị maka WhatsApp na Sticker Studio, ngwa nke choro ụfọdụ ndozi, ọ bụ ezie na ị nwere obere nka ị nwere ike ịmepụta ngwugwu na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ maka ekeresimesi a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi emepụta ihe mmado nke gị maka WhatsApp na Sticker Studio
Tojupụtara, ma ọ bụ mgbe nsogbu na-enweghị nsogbu
Otu esi zoo stats egwuregwu gị na PUBG Mobile